महन्थलाई देउवाको प्रश्न– सरकारमा आउने हो र ? » देशपाटी
महन्थलाई देउवाको प्रश्न– सरकारमा आउने हो र ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भएको छ ।
ठाकुरसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि सहकार्यको अपेक्षा राखेको बताएका थिए । देउवाले ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुनेबारे जिज्ञासा समेत राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिनुभयो, माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभयो र सरकारमा आउनेबारे महन्थजीको धारणा सोध्नुभयो’, भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो ।
जवाफमा ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा माग पूरा गराउने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका थिए । ठाकुरले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न सक्रियता देखाए सरकारमा सहभागी हुन समस्या नरहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो पार्टीमा केही समस्या छ, त्यो टुंगो लाग्नुपर्ने छ । हाम्रो माग पूरा गर्नुप¥यो, सरकारमा जानेबारे हामी विचार गर्छौं’, ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।